Yonke into omele uyiqonde malunga neProviron yokwakha umzimba
Yonke into malunga neProviron
1.Yintoni iProviron? Ingaba isebenza kanjani? 2. I proviron isilinganiso
3.Vviron cycle 4.Proviron iziphumo
5.Vviron-half half life 6.Vviron yokusika
7.Vviron yokubamba 8.Proviron Benefits
9.Vviron uhlolo 10.Proviron ukuthengiswa
11.Proviron yoKhuseleko lweZakhiwo -Isishwankathelo
1. Yintoni iProviron? Ingaba isebenza kanjani?
Proviron ligama lomkhwa we-androgen ebizwa ngokuba yi-androgen Mesterolone. Le yonyango yomlomo engacatshangwanga ukuba yi-anabolic steroid ngenxa yeempembelelo ze-anabolic eziphantsi komzimba. Enyanisweni, kuthathwa ngokuba neempembelelo ze-androgenic. I-Proviron yaphuhliswa kwi-1934 ngokuShicilela ukuyenza phakathi kwe-steroid endala eyenziwa kunye neyimarike yokusetyenziswa kwemithi. Isilwanyana siye sithengiswa kumarhwebo ngamagama ahlukeneyo, kodwa i-Proviron iye yahlala iphezulu kwiminyaka. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron isengenye yezinto ezingenakucatshangelwa i-steroids. Ungathenga izilwanyana kwiindawo ezahlukeneyo zokuthengisa okanye u-intanethi kwi-website yethu.
Proviron (1424-00-6) i-steroid ekhethekileyo ekwabelana ngeendlela ezahlukeneyo Masteron (Drostanolone), Winstrol kwaye Anavar kwinqanaba elithile. Ngokubhekiselele kwendlela yokusebenza ngayo, i-Proviron ayikwazi ukusetyenziswa ukukhuthaza ukuxhotyiswa kwamathambo amaninzi, kodwa yenza isongezelelo esibalulekileyo ekuqeqesheni umzimba. Oko kwathiwa, i-Proviron isetyenziswa ngokubanzi ekujikelezeni imijikelezo ngabaninzi bezemvelo kunye nabadlali. Kwihlabathi lezonyango, i-Proviron iphakathi kwe-steroid esetyenziswa kakhulu kumayeza anamhlanje. Nangona kunjalo, i-Mesterolone ukususela ekuphuhlisweni kwayo ayizange ivunywe ukusetyenziswa ngabantu yi-United States of America FDA.
Ukusetyenziswa kweproviron oyintloko kwihlabathi lezokwelapha kukunyanga kwe-androgenic echaphazela kakhulu indala. Isilwanyana sisetyenzisiwe njengoncedo lokuzala kunye ne-pre-pubescent yamadoda. Le yodwa yenza iProviron ibe yi-steroid encedo kakhulu enika iziphumo ezintle emzimbeni womntu. Nangona isicatshulwa sithathwa njengamayeza endala, kuye kwavela ukuvavanywa kwexesha, kwaye ngaphezu kweminyaka ikhuselekile, kwaye iyakhathazeka kwizigulane ezininzi. Abaqulunqwa ngamagumbi kunye nabanye abagijimi nabo basebenzisa izixhobo zamachiza ukubanceda bafumane imisipha enzima kunye nokuphucula ama-hormone e-testosterone. I-hormone yeTestosterone ibambe iqhaza elibalulekileyo ekuncedeni abadlali nabadlali bezemvelo ekuphuculeni ukusebenza kwabo.
I-Proviron yi-dihydrotestosterone etholakala kwi-anabolic steroid, kwaye isakhiwe i-hormone ye-DTH ngokudibanisa kweqela le-methyl nekhabhoni kwindawo enye. Oku kwenza ukuba i-hormone iphile ngokungenwa komlomo kuba ikhuselekile kwi-breakdown hepatic. I-Proviron iphakathi kwezimbalwa ze-anabolic steroids ezingekho i-C17-alpha alkylated, kodwa endaweni yayo, ithwala iqela le-methyl. I-Oral Primobolan yenye enye i-steroid eyaziwayo eneqela elifanayo le-methyl. Iproviron inexabiso le-androgenic malunga ne-30 kwi-40 kunye nesilinganiselo se-anabolic esukela kwi-100-150. Ukuvavanywa kwenziwa xa kuthelekiswa ne testosterone. Nangona i-Proviron inomlinganiselo ophezulu we-anabolic kune-testosterone, ichaza izakhiwo ezingezantsi ze-anabolic.
Inzuzo eyaziwayo kakhulu yeProviron yinkalo yayo yokusebenza njenge-anti-estrogen ngokusebenzisa isenzo sayo njenge-aromatase inhibitor. Amachiza e-aromatase inhibitor amandla angalinganiswa neArimidx, kodwa aphantsi. Kwakhona Proviron unalo kaBorrow eliphezulu Sex hormone Ngukhuleka globulin (SHBG), nto leyo iproteni elibophayo kakuhle le steroid emzimbeni wakho kwakunye benikela kubo engasebenziyo xa bamolulayo. I-Sustanon 250 isebenzisa, i-Cycle, Isisombululo, iiNzuzo, iziPhononongo
Ngoko ke, ukuthatha iProviron kunye nezinye i-anabolic steroids kuphucula imisebenzi yayo kwaye kukukunceda ukuba ujonge iziphumo eziphezulu. Isilwayo sinika indlela kunye neendawo ezinokubakho ngokusebenzisa indlela ekhankanywe ngasentla ukushiya i-testosterone engabonakaliyo kunye nekhululekile ukuba iphumeze imisebenzi yayo. Ukufumana iziphumo ezingcono, kucetyiswa kubo bonke abasebenzisi ukuba bahlolwe ngonyango kwaye ba ndakanye ugqirha kwinkqubo yonke. Kungakhathaliseki ukuba izilwanyana ziphumelele kangakanani, ngamanye amaxesha kungenakusebenza kakuhle nabanye abantu ngenxa yemeko yabo yempilo okanye ubunzima beenkqubo zomzimba.
2. I proviron isilinganiso
The I proviron isilinganiso kuxhomekeke kwiimfuno okanye izizathu zokuba uyithatha. Abanye abasebenzisi bayacetyiswa ukuba bathathe ama-dosages aphantsi ngelixa abanye kufuneka bahambe kwiidayiti eziphezulu ukuze baqonde iziphumo. Ngokomzekelo, kwihlabathi zonyango ukunyanga androgenicity zaneleyo emzimbeni, elinye icwecwe 25mg Proviron ekufuneka athathwe usuku kathathu oko kuthetha abangama 75 GM yonke imihla idosi esicetyiswayo. Umyinge uyancitshiswa ngokukhawuleza ukuya kwi-25mg ngemini ukugcina amanqanaba eProviron emzimbeni. Ngonyango lokungabikho koluntu kubantu, isilinganiselo esifanayo siya kukwanela ukuhambisa iziphumo ezilindelekileyo. Nangona kunjalo, kufuneka uvumele ugqirha wakho ukuba abeke amanani afanelekileyo kwimeko yakho.
Kwizakhiwo zomzimba kunye nezemidlalo, i-Proviron dosage iphakamileyo kunokuba isetyenziswe kwiinjongo zokwelapha. Apha ama-dosage avela kwi-50-150mgs ngosuku malunga nokulawula ii-estrogen okanye ukunciphisa amanqanaba okugcina amanzi. Okokuqala, ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uhambe ngee dogi ezantsi ezingakhutshwa njengoko uqhubeka nomjikelezo wakho. Kubasebenzisi be-hardcore, ama-dosage aphezulu kuphela aya kuhambisa iziphumo ezilindelekileyo. Ukusebenza okufanelekileyo kunye nokutya kudlala indima ebalulekileyo kunoma yimuphi umenzi womzimba okanye umgijimi ukuba abe neziphumo eziphezulu.
Abadlali bezemidlalo nabasemzimbeni bawasebenzisa ngokunxulumene nale nkunkuma emangalisayo, nangona ingazange ivunyiwe ukusetyenziswa kwabasetyhini. Kuba abasebenzisi ababhinqileyo, ichiza iinkonzo iziphumo ezisemgangathweni, kodwa kufuneka isetyenziswe iidosi ophantsi 25mgs ngosuku ukwenzela umjikelo ukusuka 4 ukuya kwiiveki 5. Imilinganiselo ephakamileyo kwabasetyhini inokukhokelela ekuphuhlisweni kweempawu zesintu ezifana nezihlunu, ukukhula kweendvuba nokunyuka kwezwi. Ngokuqinisekileyo, akukho mfazi ngisho nabadlali abafuna ukuhlakulela abalinganiswa, nokuba ngaba ugxile ekubeni nomsebenzi ophumelelayo. Xa kunokwenzeka nayiphi na imiphumo emibi yeproviron, ugqirha unokunciphisa ama-dosage okanye ugqibe umjikelezo kwaye ufumane iziyobisi ezinokunyamezela kwimpilo yakho.
Njengokuba xa usebenzisa ezinye i-steroids, xa ukhangela nayiphi na intuthuko ongeyonto, qaphela ukuba ugqirha ugqirha wakho ngexesha. Ngamanye amaxesha nangona uhamba ngee-dosages eziphantsi, unokuphela ukufumana iziphumo ezibi kakhulu. Kuyinto eqhelekileyo kuba imizimba yabantu ayifani kwaye ezinye ziyinkimbinkimbi. Kwabanye abasebenzisi, i-dose ye-25mg yansuku zonke ingaba phezulu, kodwa ugqirha wakho unokuhlala efumana imilinganiselo efanelekileyo yezidingo zakho. Abasebenzisi basetyhini kufuneka basebenzise iProdon kunye nokunyamekelwa okukhulu ngenxa yokuba ezinye iziphumo ezingasayi kubuyiselwa.
3. Umjikelezo weProviron
I-Proviron ayinayo i-anabolic steroid eqhelekileyo kwaye ine-effect ebuthakathaka kakhulu ye-anabolic emzimbeni womntu; ngoko ayisebenzisi ngendlela yemigudu. Endaweni yoko, isilwanyana sisetyenziswe njengomkhiqizo owongezelelweyo okanye njengomncedisi kwezinye ii-anabolic steroid imijikelezo ukunciphisa ukunciphisa iziphumo ze-estrogen emzimbeni wakho. I-Proviron isetyenziswa kakhulu kwimiphumo ekhangayo ekuphuculeni ukubukeka okanye umzimba ukuba bonke abadlali okanye abaqulunqa umzimba bafuna. Iimjikelezo zixhomekeke kwisizathu esisetyenzisweni seProviron. Izigulana ezithatha isiza ziba nemigqithana emifutshane ngelixa izixhobo zomzimba zithatha iziyobisi kunye nezinye i-anabolic steroids zinokujikeleza ixesha elide.
Ngokomzekelo, izigulana ezithatha iziyobisi ukunyanga ukungasebenzi okanye u-androgen ongenakuthola unokucetyiswa ukuba uthathe umlinganiselo wexesha elifaniyo. Nangona kunjalo, ugqirha wakho kufuneka abeke isilinganiselo esifanelekileyo kunye nomjikelezo emva kokuvavanya imeko yakho. Ngakolunye uhlangothi, abakhi bomzimba okanye abagijimi abasebenzisa i-hardcore Proviron, ububanzi babo phakathi kwe-8 ukuya kwiiveki ze-12. Abasebenzisi abatsha beProviron ekwakheni umzimba baya kuqala ngomjikelezo weveki ye-8 phambi kokuba ugqirha uyolulele kwi-12 kwiimjikelezo ezilandelayo. Ukuba kunjalo, uthatha le nkunkuma kunye nezinye i-anabolic steroids, velisa zonke iinkxalabo zakho ngogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale imijikelezo yakho. Khumbula, ukugcina rhoqo isilinganisi semiphumo engcono. Ukuthatha iifayili zeProviron ezahlukeneyo kunokubangela imiphumo emibi eyona nto yokugqibela nayiphi na into eyenziwa ngumsebenzisi weziyobisi, ngamnye umsebenzisi ugxile kwiziphumo ezilungileyo. Ngoko ke, kufuneka uhlale unamathela kwimimiselo yokusetyenziswa ebhaliweyo eya kukunceda ukuba ube neenzuzo eziphezulu zeProviron.
Abasebenzisi beBestern Proviron banomjikelezo omfutshane phezu kweepayipi eziphantsi. Ukuba ungumqhubi wesifazana okanye umakhi womzimba, musa ukuthatha i-tablet ye-25mg imihla ngemihla, ngaphandle kokuba ucetyiswe ngenye indlela ugqirha wakho. Imijikelezo yowesibini imfutshane kwaye ihamba phakathi kwe-4 kwiiveki ze-5. Oku kungenxa yokuba ukusebenzisa ngokweqile kweProviron kwabasetyhini kunokukhokelela ekuhlaleni. Abadlali bezemidlalo bayakhuthazwa ukuba baqhube uviwo lwezonyango rhoqo ukuze kube lula ukubeka iliso kwizinga leProviron emzimbeni ngaphambili, ngexesha nangemva kokugqiba umjikelo.
4. Iziphumo zeProviron
Iproviron yicirha engummangaliso nangona abanye abaphandi abafana ne-AT Kicman bhengeze ukuba i-steroid engenamandla. Nangona kunjalo, xa zisetyenziswe kakuhle, izilwanyana ngokuchanekileyo zihambisa iziphumo ezintle kubasebenzisi. Njengawo nawuphi na omnye umuthi, i-Proviron inikezela ngemiphumo emihle kunye neyona mibi kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo. Iproviron iboniswe ukuba yi-stteroid enamandla xa kunjalo xa isetyenziselwa iinjongo zokwelapha okanye izakhiwo zomzimba. Nangona kunjalo, ukwandisa imiphumo, kufuneka uthathe isilinganisi esifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kwaye uhambe kunye neProviron ngokutya okufanelekileyo okanye ukuqhuba umsebenzi ngenjongo yokwakha umzimba. Nazi ezinye zeempembelelo ezilungileyo zeProviron.
Ukuphucula amanqanaba e testosterone emzimbeni
Esi sigqirha sisebenzise ukwandisa i-hormone ye-testosterone emzimbeni. I-hormone ineenzuzo ezahlukeneyo ezifana nokuphucula ukukhula kwemisipha nokuphucula i-libido yamadoda. Wonke umntu kufuneka abe nehommone ekuncediseni ukuphuhliswa kweempawu zesilisa ezifana nokuphakamisa ilizwi, kunye nokukhula kweendevu kwabanye. I-Proviron, ke, ineempawu ezizodwa ezikwenza ukuba zilungele kwaye i-testosterone ephuculisayo. Kwiimeko eziqhelekileyo, i-hormone ye-testosterone ayisebenzi kakhulu kuba i-albin ne-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). I-Proviron enobumbano obuhle kakhulu kwi-SHBG, xa ithathwa ngokubambisana ne-SHBG, ngaloo ndlela inikezela nge-testosterone inkululeko eyaneleyo yokwenza imisebenzi yayo ngokukhululekile. Kubantu abanesifo se-testosterone ngoko iProdon yilona mveliso engcono kakhulu ukuyisebenzisa.
Ukuphucula ubukhulu besisu
Ngokuqhelekileyo, i-Proviron yandisa imisebenzi ye-testosterone kunye nezinye i-steroids emzimbeni wakho. Oko kuthetha ukuba udidi lweprotheni luya kuphuculiswa kwaye kwakhona, kuphuculwe ukukhula kwemisipha. I-Estrogen iyasebenza kwaye isebenze emzimbeni wakho kuphela xa ikhuselwe kwi-estrogen receptors. I-Proviron yinyango enamandla xa kufike ekunciphiseni amandla okufumana i-estrogen kwimisipha yakho, ngoko, ukunciphisa i-estrogen esebenzayo. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron inomdla ophezulu kakhulu we-aromatase enzyme ebopha kunye ne testosterone kunye nokuguqula ibe yi-estrogen.
Umzuzwana, i-Proviron ibophezela nge-enzyme, iyavuna ama-hormone e-testosterone ekubophelelweni, ngaloo ndlela unciphisa amanqanaba okuvelisa i-estrogen. Ngaloo ndlela, lo msebenzi wenza ukuba kuncitshiswe kumakhi emanzini emzimbeni wakho, ngaloo ndlela unikezele imeko efanelekileyo ukuba imisipha yakho ikhule ibe nzima nakakhulu. Uninzi lwabalimi bomzimba kunye nabagijimi basebenzisa iProviron ukukhulisa ukukhula kwabo kwemisipha xa kunjalo kunye nokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza. I-proviron isebenza kakuhle kunye nezinye i-anabolic steroids, kwaye unokuyiquka nayiphi na umjikelo we-steroid ukuze ube nemiphumo engcono. Yazisa ugqirha wakho kukunceda ufumane umjikelezo ochanekileyo kunye nentsebenziswano eya kukunceda ufumane iziphumo zakho ezifunwayo.
Ukungasebenzi kwe-Erectile yinkinga ebhekene namadoda amaninzi kangangokuba abaguga ukusuka kumanqanaba e-testosterone behla njengeminyaka yobudala. Iproviron iphucula amazinga e-hormone ye testosterone emzimbeni kunye nokubonelela ngendawo enokubangela ukwenza imisebenzi yayo ngokufanelekileyo. Kubantu abaneengxaki zokungaziphathi, i-Proviron iyintsikelelo. Isilwanyana sele siphumelele kakhulu kunyango lweengxaki ze-erectile kumadoda.
Ukungabi nalutho kumadoda kubangelwa yingxaki yokuvelisa imbewu. Nangona kungekho namnye unako ukuchaza indlela yokwenene ukungachumi eyindoda, uthi baye baqinisekisa ukuba imveliso isidoda kuxhomekeke kakhulu kuzo zombini androgens ezifana testosterone kunye gonadotropins athi abenoxanduva zivuselela esini. Kwiimeko ezininzi, androgens aye asetyenziswa kohola ukunyanga iingxaki iinkunzi abantu, kodwa ngokufuthi ukunciphisa netuwa gonadotropin leyo eyenza kube bazibone ukuba wawu imveliso sperm. Isikhokelo esiphezulu seStananol (Winstrol) sokwakha izakhiwo
Iproviron isebenza ngokuvuselela i-androgens emzimbeni wakho kodwa ayinayo imiphumo encinci kwi-gonadotropins. Njengamanje, uphando oluninzi lufuneka luqhutywe ukuze kuchongwe ukuba le nkunkuma ingakhuthaza i-gonadotropins. Iproviron iyaqhubeka isichenge esithandwayo ekwenzeni unyango olungamadoda. Ukuphucula ama-hormone e-testosterone kumzimba wakho kwandisa amandla akho ngokwesini kunye namanqanaba okuzala. Nxibelelana nodokotela wakho ngolwazi olungakumbi malunga neProviron kwonyango lokungabikho.
Iziphumo ezimbi zeProviron
Phantse zonke iziyobisi zineempembelelo ezinokuthi zincinci okanye zinzima ngamanye amaxesha ngakumbi xa izidakamizwa ziphelile. Iproviron nayo inokukutyhila kwimiphumo eyahlukeneyo, kodwa kufuneka uxelele ugqirha wakho ngexesha. Kwezinye iimeko, abasebenzisi be-proviron banokuba nobuthathaka obuyingozi ngakumbi. Nangona kunjalo, ukunamathela kumyalelo wakho ugqirha kuyakuba yindlela efanelekileyo yokulawula iziphumo zecala leProviron. Ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo zibandakanya;
Ukwanda kwezesondo kuqhube ngakumbi kumadoda angenayo ingxaki kwi-sex drive drive.
Unokukhokelela ekusebenziseni ukuziphatha kakuhle kwabasetyhini xa kuthathwa amayeza aphezulu.
5. Proviron-half half life
Isilwanyana sinomdla obunemizuzu malunga neeyure ze-12. Yiyiphi indlela emva kokuthatha isilinganisi sakho sokunene, i-Proviron iya kuhlala isasebenza emzimbeni wakho malunga neeyure ze-12. Ngoko ke, eso sizathu sokuba kutheni i-drug dosage ihlala ihlukaniswe kabini ukuya kwethathu ixesha lokugcina amanqanaba ayo rhoqo emzimbeni wakho ukuze ube nemiphumo engcono. Kungakhathaliseki ukuba ufuna ntoni ukuphumeza ngokuthatha iProviron, oko akutshintshi Proviron ubomi obulicla. Kubaqalayo, umlinganiselo we-50mgs kufuneka uhlukaniswe kabini kwaye uthathe iipilisi ze-25mg kabini ngosuku. Iproviron inexesha lokufumana malunga nee-5-6 iiveki ezithethayo xa uhamba ukuhlolwa kwezokwelapha ngeli xesha; isiza lisaza kufumaneka emzimbeni wakho. Kubadlali abadlala inxaxheba kwimincintiswano engavumeli ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa okanye ezinye i-steroids, kukulungile ukwenza ixesha elifanelekileyo, ukuphepha ukuphazamisa umsebenzi wakho. Abakhi bomzimba abanenkinga, kwaye banokusebenzisa izilwanyana ngokufanelekileyo naliphi na ixesha kwaye bafezekise iinjongo zabo ezilindelekileyo emva kokugqiba imijikelezo yabo.
6. Proviron yokusika
Kwiminyaka emininzi abagijimi kunye nabakhi bomzimba baye basebenzisa iProviron ukubanceda ekujikelezeni kwabo kunye nokukrazula. Iyeza landisa amanqanaba e-androgen ngelixa unciphisa amazinga e-estrogen emzimbeni wakho. Ukunyuka kweproviron kwandisa udidi lweprotheni kunye nokuvumela i-hormone ye testosterone ukusebenza ngokukhululeka. Amafutha omzimba ogqithiseleyo angakukhanyela ukuxhamla kwemizimba kunye nobunzima obunqwenelayo njengombumbi womzimba.
Nangona kunjalo, kubandakanywa neProviron kumjikelezo wakho wokusika, yinto engcono kakhulu ekufezekiseni iinjongo zakho. Xa usebenza ngokufanelekileyo kunye nokutya, ekugqibeleni uza kuhlakulela izihlunu ezinzima. Ukusika amaninzi omzimba emzimbeni wakho kukunceda ekuqaliseni izihlunu ezinzima kunye ezixhomekeke ekupheleni komjikelo wakho. Ubuninzi be-anabolic steroids emarike luncedo ekuncedeni ukuba ufumane iisiphako okanye iipounds, kodwa ukuze ujikeleze imijikelezo, kufuneka uquke neProviron kumjikelezo wakho wezilingo. Xhumana nogqirha wakho ukuncedisa ekwakheni umjikelo ofanelekileyo kwiimfuno zakho.
7. Proviron yokukhwabanisa
Apha ujolise ekongezeni iipounds emzimbeni wakho kwaye ukwazi ukukhuphisana ngempumelelo. Proviron ukukhwaza isilwanyana esaziwayo esingafakwa kunye ne-anabolic steroids ezahlukahlukeneyo ukunikela iziphumo eziphezulu kunye neziphumo. Ngoko ke, xa isetyenziswe yedwa, isichengisi singabi ncedi kumyili womzimba ofuna ukuhlakulela imisipha enzima kunye neyonge ezinye iipounds. I-stacking Proviron kunye nezinye i-steroids yinto engcono kakhulu ukususela ekubeni isebenza ngokuchanekileyo kunye nayo yonke i-anabolic steroids. Unokufaka kwi-dosage yakho ubuncinane ubuncinane be-50mgs ngosuku ngosuku lwakho lokujikeleza.
Ukutya okufanelekileyo kunye nokusebenza kuya kudlala ebalulekileyo apha, ukuze ufumane ubunzima obuyidingayo. Ukuba ngumhlaza wonyango kufuneka usebenzise yonke imihla, kodwa kuya kusebenza kakuhle nezinye i-anabolic steroids. Nangona abaninzi bakha umzimba baqulethe iProviron kwimijikelezo yabo yokusika, kunokunika iziphumo ezintle xa zibandakanyekile kwiimjikelezo zokubhukuda. Abanye bavakalisi bekhwalithi yomgangatho weengxelo emva kokufaka iProvon kwimigangatho yabo yokubhukuda, oku kuthetha ukuba bayayilungisa ngokukhawuleza. Soloko uthetha nogqirha wakho ukuyila umjikelezo ongcono kunye nomlinganiselo wokufumana iziphumo ezingcono ze-Proviron bulking.
I-Proviron ihambisa iziphumo zekhwalithi kubo bonke abasebenzisi bayo kwaye iveza izibonelelo ezahlukeneyo zombini kwizakhiwo zomzimba kunye nezokwelapha. Ngokwezifundo ezahlukeneyo zesayensi kunye nokuphononongwa kwabathengi, kuyacaca ukuba le nkunkuma iye yanceda ngeendlela ezininzi. Ubungakanani beProviron yokwandisa i-testosterone kunye nezinye i-anabolic steroids potency yinto ebonakalayo kubasebenzisi abaninzi. Ukusebenzisa abasebenzisi be-steroid abangakhululekile ngama-injection rhoqo, i-Proviron inikezela ngemiphumo oyifunayo ngokusebenzisa umlingo womlomo. Nazi ezinye zezinto ezibalulekileyo Proviron inzuzo;
Ukususela ekukholeni kwayo kokuqala kwi-1934, i-Proviron ibe yilisi ephezulu kakhulu ekunyangekeni kokungabikho komzimba kunye nokusebenza kakubi kwe-erectile. Iingxaki ze-Erectile zibangelwa ngamanqanaba aphantsi e-hormone ye testosterone emzimbeni. Njengoko kukhankanywe ngaphambili, ukulahleka kwe-testosterone kuphezulu kwiminyaka yobudala ekubeni ukuveliswa kwe-hormone yesondo kuhla kunye nobudala. Ngako oko, i-Proviron ibe yintsikelelo kubo bonke abantu abangenawo amandla kunye nokungabikho. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron ingakwazi ukuguqula iimpawu ze-hypogonadism ezinokubandakanya i-libido ephantsi, ukuveliswa kwe-sperm ephantsi, ubuninzi beethambo kunye nokunciphisa umzimba. Ezinye izifo zingaphula izihlunu zakho, kwaye ugqirha wakho uya kugunyazisa ukusetyenziswa kweProviron. Kuzo zonke iimeko, iziza liza kuzisa kuphela iziphumo eziphezulu xa zilawulwa kakuhle. Ukuba unomnye unyango ophantsi kwonyango, xelela ugqirha wakho ukuba angaphepheli kwimiphumo emibi.
Iproviron yongezwa ngokubanzi ekwakheni umzimba njengoko inceda abasebenzisi ukuba banandiphe inzuzo ephezulu ye-anabolic steroids. Abaninzi bomzimba baquka iProviron ekujikelezeni kwabo. Esi sichiza siphucula ukuveliswa kweprotheyini jikelele emzimbeni, oko kukukhuthaza ukukhula kwemisipha. Kubafundi bomzimba abenza umsebenzi omkhulu onzima, amayeza anceda bafumane izihlunu ezinzima kwaye zixhomekeke ekupheleni komjikelo wokugwedeza okanye wokusika. Ukufakwa kwesitye kuyinto eqhelekileyo ekwakheni umzimba kwaye kunceda abasebenzisi ukuba baqonde iziphumo ezifunwayo ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Ezinye i-steroids esisodwa emzimbeni ziguqulwa zibe yi-estrogen, kwaye iPiron idlala indima ebalulekileyo ekuthintela le nkqubo. Ngakolunye uhlangothi, i-steroid yenza i-hormone ye-testosterone isebenze ngokukhululekile emzimbeni, ngaloo ndlela iqinisekisa iziphumo zemigangatho efana nokuphuhliswa kwemizimba eqinekileyo kubo bonke abaqulunqa umzimba.
Iproviron ifana ne-DHT, kwaye iyandisa ukuba ibe nempembelelo efanayo kunye nokuphucula ukuqina komzimba kunye nokuphucula amandla omzimba jikelele owenza abadlali baqhume ngokuphumelelayo. Ngokuqhelekileyo, le nkunkuma ikwandisa ukusebenza kwabadlali bonke ngexesha lokusebenza kunye nakwiintlanganiso zenkxaso yangempela. Kweminye imidlalo apho amandla namandla umzimba, iPiron yenza kakuhle. Iindaba ezilungileyo kukuba i-Proviron ibonakala kuphela kwiiveki ze-6 emva kokugqiba umjikelo wakho. Ngaloo ndlela, kufuneka nje ukufumana ixesha lakho lokufanelekileyo, kwaye wenza kakuhle nakwiimidlalo ezingakhuthazi ukusetyenziswa kwe-steroids.
Isikhuseli esikhuselekileyo esibindi sakho
Nangona i-Proviron isilwanyana esisemlonyeni, akusiyo isicibisi kwisibindi sakho, kwaye oko sikwenza phakathi kwe-steroids ekhuselekileyo kwimarike. Abasebenzisi abaninzi be-steroid abazikhululekile ngama-injection rhoqo. Ngoko ke, ungasebenzisa iipilisi zeProviron kwaye ujonge izibonelelo. Ukunqongophala kwe testosterone, i-Proviron inikezela isisombululo esihle kunazo zonke nabaselula. Ungasebenzisa le nkunkuma kunye nezinye i-anabolic steroids, kwaye awuyi kuba nemiphumo emibi kakhulu kwi-fover yakho.
9. Uhlolo lweProviron
Njengaye nayiphi na enye i-steroids kwimarike i-Proviron iye yafumana ukuhlaziywa kwabathengi abahlukeneyo ngamnye ngokunika imibono eyahlukileyo ngamava abo ngamayeza. Abanye abantu babika iziphumo ezigqwesileyo kakhulu ngoko ke izigulane ezijongene nokungabi namandla nokungabikho. Kwilizwe lezonyango, i-Proviron ibe yilisi ephezulu kwaye ihambise iziphumo eziphezulu. Ngakolunye uhlangothi, abagijimi kunye nabadlali bomzimba banikezela izilwanyana ezintle kakhulu. Uninzi lwabasebenzisi beProviron banelisekile ngamandla abo okubanceda bafumane iinjongo ezahlukeneyo. Abadlali abavela kwimincintiswano eyahlukeneyo bangasebenzisa iProviron ukunyusa amandla omzimba jikelele kwaye ekugqibeleni baphucule ukusebenza kwabo.
Ukujonga ngeendlela ezahlukeneyo Proviron ncomo, ungatsho ukuba uninzi lwabadlali bavuyiswa yiziyobisi. Ngokukodwa, amandla okusebenzisa izidakamizwa ukuba apheleke kwindlela yomzimba ngexesha elifutshane kunokwenzeka liye ladunyiswa ngabasebenzisi abaninzi. I-Proviron iyalalalala emzimbeni emva kweeveki ze-6 ezenza kube yinto encedisayo kubadlali abathatha inxaxheba kwimincintiswano eye yavumele ukusetshenziswa kwe-steroids. Ngexesha elifanelekileyo, unako ukusebenzisa i-Proviron kwaye uthathe inxaxheba kumncintiswano wakho olandelayo ngokufanelekileyo.
Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi bayakhononda ngokuba nemiphumo eyahlukeneyo emva kokuba basebenzise izilwanyana ezinjengeentloko, ukuchithwa kwexesha elide kunye nokukhula okunamandla kubasebenzisi abancinci. Imizimba yabantu iyinkimbinkimbi, kwaye kutheni abantu bafumana iimiphumo ezahlukileyo zimbini kwaye zilungile. Iziphumo zecala leProviron zingalawulwa ngokuthatha isilinganisi esifanelekileyo. Unokuqhagamshelana nogqirha wakho xa uqala ukufumana iziphumo zecala ukukunceda ufumane isisombululo. Kwihlabathi le-steroid, kungekhona wonke umntu oza kufumana iziphumo ezilungileyo, kodwa ezininzi iziphumo ziphumo zivela kwi-proviron yokudlulela.
10. Proviron ukuthengiswa
Okwangoku, kuninzi abathengisi beProviron kwiimarike, ngoko ke kufuneka ukuba uqaphele xa uthengisa isiza. Kufuneka uhlale ukhumbule ukuba kuphela iPivonon yekhwalithi inokukuqinisekisa ukuba iziphumo eziphezulu. Yonke into namhlanje idijithali, kwaye unako lula kuthenga Proviron powder kwiwebhusayithi yethu. Kwimimandla, siyimveliso engcono kakhulu yeProviron kunye nomthengisi. Ii-arhente zehlabathi ezichaphazelekayo zivumelekile zonke iimveliso zethu, kwaye akukho nto unokukhathazeka ngayo xa wenza umyalelo wakho. Senza ukuhanjiswa okufike ngexesha ukuqinisekisa ukuba uqala isilinganisi sakho ngexesha elifanelekileyo. Unokuthenga kwakhona iPowon powder kwiwebsite yethu.
Kuhlala kucebise ukuba wenze uphando lwakho kwi-Proviron nabathengisi abakhoyo. Akunjalo bonke abathengisi obafumanayo kwimarike banokuthenjwa. Abanye balapho ukuze benze imali, kwaye abanandaba malunga nentlalo yakho. Jonga kumanqaku ahlukeneyo kumakhasimende, hlalutye phambi kokuba wenze isigqibo sakho sokugqibela apho Umthengisi weProviron ukuthembela. Sinewebhsayithi elinobuchule elivumela ukuba uqhube ngokulula ukusuka kwisiqhamo esinye ukuya kolunye kunye nokwenza umyalelo wakho ngemizuzwana. Ungathenga iProviron ngobuninzi okanye ufumane ngokwaneleyo ukulinganisa kwakho.
Kwakhona, khangela iinkcukacha zelizwe lakho ukujonga ukuba zixhasa ukuthenga, ukungenisa okanye ukusetyenziswa kweProviron. Amazwe asebenza phantsi kwemithetho eyahlukeneyo, kwaye asifuni ukubeka abathengi bethu enkingeni ngokuthenga iimveliso zethu eziphezulu. Ngokomzekelo, eUnited States, ukusetyenziswa kweProviron okanye ilifa kunokubhekwa njengento ebuthakathaka. Oko kuthetha ukungenisa, ukurhweba okanye ukuthenga i-anabolic steroids kunye neProviron isenzo sobugebengu. E-UK, i-Proviron yinto esemthethweni yokusetyenziswa okanye isabelo somntu kunye nokuthengiswa kweziyobisi kusemthethweni. Umthetho ofanayo usebenza eCanada kodwa ukurhweba izilwanyana kulwaphulo-mthetho olunokutsala ihlawuliso ezininzi, isigwebo sejele okanye zombini. Unganqikazi ukusibiza nanini na ixesha ufuna uncedo, okanye unemibuzo malunga nemveliso yethu.
11. Iproviron yeZakhiwo zoLwakhiwo -Somfa
I-Proviron isetyenziswe ngabaninzi beempawu zomzimba zombini kunye nokujikeleza kunye kunye nezinye i-anabolic steroids. Izibonelelo zonyango ekuphuhliseni izihlunu ezinzima kunye ezixhomekeke ngakumbi xa zihambisane nokusebenza okufanelekileyo kunye nokutya. Indima ephambili yeProviron kukunyusa amandla e-steroid emzimbeni wakho, kwaye ke kutheni abaninzi abaphucula umzimba baqulethe kuyo yonke into. Isilwayo sinika i-hormone ye-testosterone inkululeko yokusebenza emzimbeni wakho, ngokukwandisa nayiphi na imiphumela ye-anabolic steroid. I-Proviron inamabutho aphezulu kakhulu ekubopha nge-enzyme ye-aromatase, kwaye abasebenzisi be-anabolic steroid bangayisebenzisa njengento yokutshintshwa kwe-aromatase.
Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron yisiza esaziwayo esibopha kakuhle nge-Sex Hormone Binding Globulin, eyanciphisa ukujikeleza kwe-testosterone emzimbeni wakho. Yingakho abanye abaqulunqa umzimba bekhetha ukusetyenziswa kwezi zidakamizwa ngexesha le-PCT. Nangona kunjalo, kwi-bodybuilding Proviron yedwa ayikwazi ukuhambisa imisipha yekhwalithi ngaphandle kokuba ibandakanyeke nezinye i-anabolic steroids eziphathekayo. Isilwanyana saziwa ngenxa yeempahla zayo ezinzima kwaye zikhuthaza amandla omzimba onokulungele ukuqhutyelwa kwemisebenzi kwaye ngexesha lokukhuphisana. Gxila kumyinge ochazwe ngugqirha wakho ukuphepha iingxaki. Ukuhlalutya umyinge ngezinye iziphumo kungabangela imiphumo emibi okanye kukuthintele ukufikelela kwiinjongo zakho.
De Souza, GL, & Hallak, J. (2011). I-Anabolic steroids kunye nokungabikho kwamadoda: ukuhlaziywa okubanzi. BJU ngamazwe ngamazwe, 108(11), 1860-1865.
Angell, PJ, Green, DJ, Lord, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Iimpendulo ezinobomi be-cardiovascular response to exercise exercises in abasebenzisi be-anabolic steroids: Uphando lokuqala. INzululwazi neMidlalo, 33(6), 339-346.